E SETERE KA NDỊ ỌRỤ ỤLỌ AKỤ SO NDỊ OJIEGBEEZU EZU EGO ỤLỌ AKỤ-NDỊ UWE OJII – hoo!haa!!
Ado Ekiti – Mazị Asuquo Amba, Kọmishọna ndị Uwe Ojii n’Ekiti Steeti nọrọ taa were kwuo na Onye nlekọta ukwu, ndị Uwe Ojii ala Naịjiriya, Mohammed Adamu, enyela ntimiwu ka e mee nyochaa miri emi maka mwakpo ndị ojiegbeezu wakporo ụlọ akụ nakwa ụlọ ọrụ ndị Uwe Ojii n’Oye Ekiti ụnyahụ.
Ndị ojiegbeezu ahụ bu ụzọ wakpo ụlọ ọrụ ndị Uwe Ojii n’ebe ahụ tupu ha gaa wakpo ụlọ akụ ahụ, ebe ha jiri ogbunigwe “dynamite” gbarie ọnu ụzọ e wusiri ike were buru ego dị nde Naira iri abụọ n’ise tinyere ego ndị mba ofesi.
Ha gbagbukwara otu onye Uwe Ojii nọ ọrụ oge ahụ nakwa obere nwatakịrị nwanyị dị afọ asaa nne ya na – ere ahịa mbugharị ebe ahụ.
Amba, onye kwuru okwu oge ọ bịara iji anya hụ ihe merenụ, kwuru na onyonyoo CCTV ụlọ akụ ahụ gosiri na aka ụfọdụ ndị ọrụ ụlọ akụ ahụ dị n’ohi ahụ.
O kwuru sị, “Ihe tụrụ m n’anya bụ na e nwere ihe jikọrọ ndị ojiegbeezu ahụ na ụfọdụ ndị ọrụ n’ime ụlọ akụ ahụ. Ụlọ ọrụ ndị Uwe Ojii Oye dị nso n’ụlọ akụ ahụ. Ndị ọrụ ụlọ akụ ahụ kwetara na nụrụ ka egbe na-ada na nke ndị Uwe Ojii ahụ. O rukwara ihe dịka nkeji iri tupu ndị ojiegbeezu ahụ were si ebe ahụ rute ụlọ akụ ahụ.
“Site n’oge a wakporo ụlọ ọrụ ndị Uwe Ojii ruo oge ha ji rute ụlọ akụ ahụ, ndị ọrụ ahụ nwere ohere isi azụ ụlọ were gbapụ. Onyonyoo CCTV setara ebe ha na-ebupu ego n’ụlọ nchekwa ego (vault) ụlọ akụ ahụ tupurii ndị ojiegbezu ahụ e rute.
Amba kwukwara na onyonyoo CCTV ahụ gbakwara ama etu ndị ọrụ ụlọ akụ tinyere otu onye ahia ha, onye gbabatara n’ime oge ọ nụrụ ụda egbe, si jiri ohere mwakpo ahụ were fọjuo ego n’akpa ha ka ha bara ya bụ ụlọ nchekwa ego ugboro ugboro tupu ndị ojiegbezu ahụ
Previous Post: BỊAFRA:OGBUNIGWE AGHA KA DỊ N’AMAWBIA
Next Post: ỌCHỊCHỊ UGBORO ATỌ :A GAGHỊ M ANWA YA ANWA- BUHARỊ